Chapter 11 – အတ္တကျော်ရဲ့ စာပေါင်းစုံ
ကျွန်တော့်ဘလော့(ဂ်)ကို လာရောက်လည်ပတ်ကြတဲ့ ချစ်စွာသော မိတ်ဆွေများခင်ဗျား။
ကနေ့ ၂၀၀၉ အောက်တိုဘာ ၁၃ ရက်နေ့ ညပိုင်းမှာ ကျွန်တော် ရန်ကုန်မြို့က ခဏ ခွာပြီး ဧရာဝတီတိုင်းက မုန်တိုင်းသင့် ကျေးရွာတစ်ခုက ရပ်သူရွာသားများကို စွမ်းရည် မြှင့်တင်ရေး သင်တန်းတစ်ခု သွားရောက် ပို့ချရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ သင်တန်းကာလက ဆယ်ရက် ကြာမြင့်မှာပါ။ ဒါ့ကြောင့် ကျွန်တော်နဲ့ အိမ်သာအမည်းကြီး (အင်တာနက်)နဲ့လည်း ယာယီ ခွဲခွာနေရမှာ ဖြစ်ပါတယ်။ ဒါ့ကြောင့် ကျွန်တော့် ဘလော့(ဂ်)မှာ သည်ကာလအတွင်း အသစ်တင်ပေးနိုင်ဦးမှာ မဟုတ်သေးပါဘူး။ အောက်တိုဘာ ၂၇ ရက်လောက်မှ အသစ်တင်ပေးနိုင်မယ်လို့ တွက်ဆထားရပါတယ်။
သည်အတွက် ချစ်ခင်လေးစားရတဲ့ မိတ်ဆွေများကို သည်းခံတော်မူပေးကြဖို့ ပန်ကြားလိုတဲ့အပြင် သည်ကြားထဲမှာ မိတ်ဆွေများက ရေးသွားတဲ့ မှတ်ချက် (comment) အထွေထွေကိုလည်းပဲ ကျွန်တော်ပြန်လာမှသာ အတည်ပြု moderate လုပ်ပေးနိုင်မှာမို့ အဲဒါကိုလည်း နားလည်ခွင့်လွှတ်တော်မူပေးကြပါရန် လေးစားစွာ ပန်ကြားပါရစေလား ခင်ဗျား။
အားလုံးကို ကျေးဇူးတင် ခင်မင် လေးစားစွာ
၂၀၀၉ အောက်တိုဘာ ၁၃
ကျွန်တော့်ကိုယ်ကျွန်တော်တော့ အရက်နဲ့ ပတ်သက်လို့ အတော့်ကို စုံလှ လည်လှပြီလို့ ထင်ခဲ့တာပါ။ တကယ်တမ်းကျတော့ ကျွန်တော် သိထားတယ် ဆိုတာ ဘာဆို ဘာမှ မပြည့်စုံသေးမှန်း အဲဒီ့တစ်ချီတည်းနဲ့တင် အတော် သိသွားပါတယ်။
စကားစပ်လို့ ပြောရရင် ဝစ္စကီဆိုလည်း ကျွန်တော်တို့က စကော့ဝစ္စကီတွေပဲ သိတာများပါတယ်။ အမေရိကန်ဝစ္စကီ (ဘာဘန်) လောက် ပိုသိရင်ကို အတော် ဟုတ်နေပြီ။ အဲဒီ့မှာမှ စကော့ဝစ္စကီထဲက မုယောစပါး တစ်မျိုးတည်းနဲ့ ချက်လုပ်ထားတဲ့ တန်ဖိုးကြီး ဝစ္စကီတွေကို သိရင် ပိုလို့တောင် ဆရာကြီး လုပ်လို့ ရပါတယ်။ ကျွန်တော်က အဲသလောက်အထိတော့ သိပါ တယ်။ ဒါပေမယ့် ဟိုးတစ်ခါတုန်းက ဖြန့်ထွက်တွေးဆရာ ဦးလေးတာ (ဆရာ ကိုတာ) တိုက်လို့ အိုင်းရစ်(ရှ်) ဝစ္စကီဆိုတာကို သောက်ဖူးသွားတယ်။ အမယ်… သူကလည်း အတော် နိပ်သဗျ။ အဲတုန်းကလည်း အင်း… လောကကြီးမှာ ကိုယ်မသိသေးတဲ့ ဝစ္စကီတွေ သည်ကမ္ဘာပေါ်မှာ အများအပြား ကျန်နိုင်ပါသေးလားလို့ တွေးမိခဲ့ရပြန်ပါသေးတယ်။
နိုင်ငံခြားအရက်ဝေးစွ၊ မြန်မာနိုင်ငံထဲက တိုင်းရင်းသားတွေ ချက်တဲ့ အရက်တောင် စုံအောင် မသောက်ဖူးပါဘူး။ လီရှောအရက် ကောင်းမှန်းတောင် မနှစ်က မိုးကုတ်ကို ရောက်တော့မှ၊ ဆရာမောင်ထွန်းဦး(မိုးကုတ်)ရဲ့ ကတော် လီရှော အမျိုးသမီး ကိုယ်တိုင် ချက်လုပ်ထားတာကို သောက်ဖူးပြီးမှ ကောင်းကောင်း သဘောပေါက်သွားပါတယ်။
အလုံးစုံကို ထိုးထွင်းသိမြင်တော်မူတဲ့ သဗ္ဗဉုတ ဘုရားရှင်ကိုယ်တော်တိုင်မှတစ်ပါး တခြား ဘယ် ပုထုဇဉ်၊ ဘယ် လူသားမှ အရာရာကို စုံအောင် မသိနိုင်ဘူးဆိုတာကို သဘောပေါက်သွားစေတဲ့ ဖြစ်ရပ်ကလေးပါပဲ။
အဲ… ကျွန်တော့် ပြောလက်စတောင် ဘယ်ရောက်သွားပါလိမ့်။
မလေးရှားလေကြောင်းက လေယာဉ်ကြီးပေါ်မှာ စားလို့ သောက်လို့ ကောင်းနေတဲ့အကြောင်း ပြောလက်စပေါ့။
အဲဒီ့ကနေ ချော်တောငေါ့သွားလိုက်တာ အခုမှပဲ လေယာဉ်ပေါ် ပြန်ရောက်တော့တယ်။ အစားအသောက် ကိစ္စပြီးတော့ အားလုံးဂနာ ငြိမ်သွားပြီ။ ပထမတော့ တောင်ကြည့်၊ မြောက်ကြည့်ပေါ့။ အမှန်ကတော့ စာဖတ်နေရမှာ။ ဒါပေမယ့် ပထမဆုံး နိုင်ငံခြားခရီး ထွက်တာမို့ တောင်ကြည့်၊ မြောက်ကြည့်ပေါ့။ စာဖတ်ချင်စိတ်က လုံးလုံးပျောက်နေတယ်။
ခက်တာက ကြည့်စရာကလည်း လေယာဉ်အတွင်းခန်းရယ်၊ အပြင်ဘက်ကို ကြည့်လိုက်ရင် တိမ်တိုက်တွေ တစ်စတစ်ပြူလောက် တွေ့ရတဲ့ မိုးသားကောင်းကင်ကြီးရယ်ပဲ ရှိတယ်။ ကြာတော့လည်း အဲဒါတွေက ကြည့်စရာ မဟုတ်တော့ဘူး။ ဒါနဲ့ ထိုင်ခုံလက်တန်းထဲမှာ ခေါက်ထည့်ထားတဲ့ ရုပ်မြင်သံကြားပေါက်စနလေးကို ဆွဲထုတ်လိုက်ပါတယ်။
ဟုတ်တယ်လေ၊ ကျွန်တော်တို့နဲ့ တူရူမှာ ရှိတဲ့ ရုပ်မြင်သံကြား ဖန်သား ပြင်မှာက မလေး လေကြောင်းတံဆိပ်ကြီးကိုပဲ အသေပြထားတာကိုး။ ဒါဆိုရင် တစ်ဦးချင်းစီအတွက် ပေးထားတဲ့ ထိုင်ခုံလက်ရမ်းထဲက ရုပ်မြင်သံကြားစက်မှာသာ ဖွင့်ကြည့်ရမယ်လို့ ရွှေဉာဏ်တော် စူးရောက်လိုက်မိသွားတာပါ။
အဲဒီ့ ရုပ်မြင်သံကြားစက်မှာက မီးအဖွင့်အပိတ် ခလုတ်ပဲ ပါတယ်။ အဲဒါနဲ့ ဖွင့်လိုက်တော့လည်း အဲဒီ့ ထောင့်တန်း ရှစ်လက်မလောက်သာ ရှိတဲ့ ဖန်သားပြင်ပေါက်စနလေးမှာက မလေးလေကြောင်းရဲ့ တံဆိပ်ကြီးပဲ အပြူးသား ပေါ်နေတယ်။ အဲဒီ့မှာ ကျွန်တော့် ရွှေဉာဏ်တော်က ဆက်လက် စူးရောက်သွားပြန်တယ်။
ရုပ်သံစက်မှာ ဘာခလုတ်မှ မပါဘူး။ တန်တော့… ဒါ ဟို အဝေးထိန်း ခလုတ်ကလေးနဲ့ ဖွင့်မှ ရမယ့်ဟာပေါ့။ ဒါနဲ့ တစ်ဖက်လက်တန်းမှာ ထည့်ထားတဲ့ ကြိုးတန်းလန်းနဲ့ အဝေးထိန်းခလုတ်ကလေးကို ဆွဲထုတ်လိုက်မိရပြန်ပါတယ်။ အဲဒီ့အဝေးထိန်းခလုတ်ကလေးကိုကြည့်တော့ ဘာ စာမှ ရေးမထားဘူး။ ခလုတ်ကလေးတွေပေါ်မှာ ပုံကလေးတွေနဲ့။ အသေးစိတ်တော့ မမှတ်မိတော့ဘူးဗျာ။ သည်လောက်ကြာမှ ပြန်ရေးတာကိုး။
မှတ်မိတာကတော့ ကျွန်တော့်ဉာဏ် လွဲချော်ပုံကိုပါ။
အဲဒီ့ခလုတ်ကလေးပေါ်မှာ ရုပ်မြင်သံကြားနဲ့သက်ဆိုင်ပုံရတဲ့ ရုပ်ပုံရယ်လို့ တစ်ခုဆို တစ်ခုမှ မတွေ့ရဘူး။ တော်တော်လည်း စိတ်ပျက်စရာ ကောင်းလှသဗျ။ အနီးစပ်ဆုံး သင်္ကေတက လူပုံ။ လူပုံဆိုရင် ဒါ ရုပ်မြင်သံကြားမှာ လူရုပ်ပေါ်အောင် နှိပ်ရတဲ့ ခလုတ်ပဲဖြစ်မယ်။ ဟုတ်တယ်လေ၊ ရုပ်မြင်သံကြားမှာ သတင်းပဲ ကြည့်ကြည့်၊ ရုပ်ရှင်ပဲကြည့်ကြည့် လူရုပ် ပေါ်တာကသာ အများဆုံး မဟုတ်လား။
အဲတော့ အဲဒီ့အတွေးနဲ့ လူရုပ်ပုံပါတဲ့ ခလုတ်ကို နှိပ်လိုက်တယ်။ ကျွန်တော့်မျက်စိအောက်မှာ ဖွင့်ထားတဲ့ ရုပ်သံပေါက်စနလေးကို လှမ်းကြည့်ပေမယ့် ဘာမှ အပြောင်းအလဲမရှိဘူး။ မလေး လေကြောင်းလိုင်း တံဆိပ်ကြီးပဲ အကွင်းသား ဆက်ပေါ်နေတယ်။
ကျွန်တော် နှိပ်တာများ နေရာမကျလို့များလားဆိုပြီး သေသေချာချာ ထပ်နှိပ်လိုက်ပြန်တယ်။
ဟား… သူတို့ဟာက အလှတပ်ထားတဲ့ဟာ နေမှာ။ လူအထင်ကြီးအောင် လျှောက်ထည့်ထားတာ ဖြစ်မှာ။ တကယ်က အပျက်ကြီးများလား မသိ။ အဲသလို ပေါက်တတ်ကရတွေ လျှောက်တွေးလိုက်ပြီး စိတ်ပျက်လက်ပျက်နဲ့ အဝေးထိန်းခလုတ်ကလေးကို သူ့နေရာ သူပြန်ထည့်လိုက်တယ်။ ရုပ်သံစက် ပေါက်စနလေးကိုလည်း ခလုတ်ပိတ်၊ သူ့အတိုင်း ပြန်ခွေခေါက်ပြီး လက်ရမ်းထဲက သူ့အံထဲ ပြန်ထိုးသွင်းလိုက်တယ်။
အားလုံးနေသားကျသွားချိန်မှာ ဟို… ဘယ်လိုမှ ကြည့်လို့မလှတဲ့ လေယာဉ်မယ်လေးက ကျွန်တော့်အနားကို ရောက်လာပြီး ပြုံးချိုနေတဲ့ မျက်နှာနဲ့ “ဘာများ အလိုရှိပါသလဲရှင်”လို့ ကျွန်တော့်ကို မေးပါတယ်။
သူတို့ရဲ့ ရုပ်သံကို မကြည့်ရလို့ စိတ်ချဉ်ပေါက်တောက်တောက် ဖြစ်နေတဲ့ ကျွန်တော်လည်း အဲသလို အလကားနေရင်း လာမေးတာကို ကျေးဇူး မတင်တဲ့အပြင် စိတ်တောင် နည်းနည်း ကွက်ချင်သလိုဖြစ်သွားတယ်။ ဒါပေမယ့် ယဉ်ကျေးမှုအရ “ဟင့်အင်း… ဘာမှ မလိုပါဘူး၊ ကျေးဇူးတင်ပါတယ်” လို့ပဲ ချေချေငံငံ ပြန်ဖြေလိုက်တယ်။ သည်အခါမှာ လေယာဉ်မယ်ရဲ့ နဖူးလေးက မသိမသာလေး တွန့်သွားတယ်။ ဒါပေမယ့် သူ့မျက်နှာ က ပြုံးပြုံးလေးပါပဲ။ ပြီးတော့ ကျွန်တော့် ခေါင်းပေါ်က ခလုတ်တစ်ခုကို လက်လှမ်းလိုက်တာမို့ ကျွန်တော်လည်း သူ့လက် သွားရာကို အလိုလို မော်ကြည့်မိတယ်။
သူက မီးလင်းနေတဲ့ ခလုတ်ကလေးတစ်ခုကို ပိတ်လိုက်တာပါ။ သူ့လက် ပြန်အရုပ်လိုက်မှာ အဲဒီ့ခလုတ်ကို အတိအကျ မြင်လိုက်ပါတယ်။
ဟုတ်ကဲ့ခင်ဗျာ… အဲဒီ့ခလုတ်ကလေးပေါ်မှာလည်း စောစောက အဝေးထိန်းခလုတ်မှာ ကျွန်တော် နှိပ်ခဲ့တဲ့ ခလုတ်ပေါ်က ရုပ်ပုံအတိုင်း လူရုပ်ကလေးကို ရေးထားပါရောလားခင်ဗျာ။
သိလိုက်ပါပြီ။ ဦးနှောက်ကလည်း ချက်ချင်း အလုပ်လုပ်သွားပါတယ်။
ဟုတ်သားပဲ၊ လေယာဉ်ပေါ်က ခရီးသည် ထိုင်ခုံတွေရဲ့အထက်၊ ပစ္စည်းထားသိုရာ အလုံပိတ်စင်လေးများရဲ့အောက်ဘက်ပိုင်းမှာ ခလုတ်ကလေးတွေနဲ့ လေဝင်ပေါက်လေးတွေ ရှိပါတယ်။ စာကြည့်မီးလေးတွေလည်း ရှိပါတယ်။ အဲဒီ့ထဲက ခလုတ်တွေမှာ မီးဖွင့်လို့ရတဲ့ ခလုတ်လည်းပါတယ်။ အဲဒီ့ခလုတ်ကိုကျတော့ မီးသီးလေး လင်းနေပုံနဲ့ ပြထားတယ်။ အဲဒီ့ခလုတ်နဲ့ ယှဉ်လျက်က လူရုပ်လေးနဲ့။
အဲဒါ လေယာဉ်မောင်၊ လေယာဉ်မယ်ထဲက တစ်ယောက်ယောက်ကို လှမ်းခေါ်တဲ့ ခလုတ်ခင်ဗျ။
သွားပြီပေါ့။ ကျွန်တော်က ရုပ်မြင်သံကြားမှာ ပေါ်မယ့် လူရုပ် မှတ်လို့ နှစ်ခါတိတိကြီးများတောင် နှိပ်ချလိုက်တာ၊ တကယ်တော့ အဲဒါ ရုပ်မြင်သံကြားမှာ ပေါ်လာမယ့် လူရုပ်ကို ခေါ်ဖို့ ခလုတ်မဟုတ်ဘဲ လေယာဉ်ပေါ် က တာဝန်ကျဝန်ထမ်း အကောင်လိုက်ကြီးကို လှမ်းခေါ်တဲ့ ခလုတ်ဖြစ်နေပါလား ဟရို့။
လေယာဉ်မယ်ရဲ့ မျက်မှောင်လေး မသိမသာ တွန့်သွားခြင်းရဲ့အဓိပ္ပာယ်ကိုလည်း သဘောပေါက်လိုက်တယ်။
ဝမ်းနည်းပါတယ် လေယာဉ်မယ်လို့ ပြောချင်ပေမယ့် သူက အနားမှာ မရှိတော့ပါဘူး။ လှစ်ခနဲ ထွက်သွားပါပြီ။
အိမ်း… မှားတဲ့အခါလည်း မှားပေမပေါ့လို့ ကျွန်တော်တို့ ငယ်ငယ်က ဖတ်ခဲ့ရတဲ့ ကာတွန်းဦးအောင်ရှိန်ရဲ့ ဇာတ်လိုက်ကျော် ဦးရှံစား ညည်းသလိုသာ ညည်းရုံ ရှိပေတော့တာပါပဲ။
သည်လိုနဲ့ ကျွန်တော်လည်း လေယာဉ်ပေါ်မှာ တောင်တောင်အီအီ တွေးရင်း ဆက်လက် စီးနင်းခဲ့ရပါတော့တယ်။
အချိန်တန်တော့ မလေးလေဆိပ်ကို ဆိုက်ရောက်တော့မယ့်အကြောင်း ကြေညာသံကြားရတယ်။
လေယာဉ်ကြီးက တအိအိ ဆင်းနေချိန်မှာ အောက်ကို လှမ်းကြည့်မိသေးပေမယ့် ဘာမှ ထူးထူးခြားခြား မတွေ့ရပါဘူး။
လေယာဉ်က အရှိန်သေသွားပြီး သူ့နေရာသူ တအိအိ သွားနေချိန်မှာတော့ ကြီးမားခမ်းနားလှတဲ့ လေဆိပ်ကြီးကို လှမ်းမြင်လိုက်ရတယ်။ ကြည့်ဖူးတဲ့ နိုင်ငံခြား စိတ်ကူးယဉ် သိပ္ပံရုပ်ရှင်တွေထဲက အတိုင်းပဲ၊ မှန်တွေ၊ ပြောင်ပြောင်လက်လက်တွေနဲ့ ခေတ်လွန် အဆောက်အအုံကြီးပါ။
ကျွန်တော် ရင်သပ်ရှုမောနေဆဲမှာ လေယာဉ်က ချိူးကွေ့လိုက်တဲ့အတွက် အဆောက်အအုံကို မမြင်ရတော့ပြန်ဘူး။ လေယာဉ်ကွင်းကျယ်ကြီးကိုပဲ မြင်ရတယ်။
Author lettwebawPosted on 13 October 2009 17 February 2010 Categories Excerpts, Reproduction, Travelogue
13 October 2009 at 4:06 pm
ဟင်… ဆိုင်းမဆင့် ဗုံမဆင့်… သွားမယ်ဆိုလည်း ဆရာရယ် လေး၊ ငါး ဆယ်ရက်လောက် ဖတ်လို့ရအောင်တော့ တင်ပေးသွားပါလား 😦 အခုတော့ တစ်ပုဒ်တည်း…
13 October 2009 at 4:43 pm
အဲ… အဲလို ပြောတော့လည်း စိတ်ထဲ မကောင်းဘူး။ ဒါ့ကြောင့် ပို့(စ်)ကို နေ့စဉ် မှန်မှန် အသစ်တင်ပေးဖို့ သားတော်မောင်ကို တာဝန်ပေးအပ်ထားခဲ့ပါသဗျား။ သူကလေး မမေ့ဘူးဆိုရင်တော့ အသစ်များကို နေ့စဉ် မှန်မှန် ဖတ်ရှုနိုင်မယ့်အကြောင်း သတင်းကောင်း ပါးအပ်ပါတယ်။
Previous Previous post: What would you like to have?
Next Next post: Was that Because of Us???